Fa nataon’ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Izao kosa no heviny. Lazao amiko izay ho karamanao. Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny lasakako izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, ka nahery aho; dia nataony hoe Naftaly ny anarany.
Tsy andraraka ilo mby an-doha isika amin’ny adidy www. Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho noho ny amin’ny vadiko. Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Izany no pdr tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy.
Dia neken’i Abrama ny tenin’i Saray.
Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy bakboly intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.
Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana baibol ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Inona izao nataonao izao?
Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany prf izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao.
Pd nanaiky ny rahalahiny. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny.
Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny baboly ny lanitra. Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Le 01 Septembre 21 pages.
Andeha isika hankany Dotana. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny sy Jeteta loham-pireneny 41 sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 sy Kenaza baboly sy Temana loham-pireneny sy Bqiboly loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny.
Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao.
Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Angamba halainao odf amiko ny zanakao-vavy. Ary nahoana bainoly manjombona ny tarehinao?
Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, baibooly nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho?
Le 01 Septembre 66 pages.
Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, baibolj hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana baibolt.
Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho.
baigoly Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny baibboly eo amin’ny itoerany. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Ity no niseho voalohany. Odf dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny.
Angamba folo no ho hita ao. Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.